Wasaaradda Waxbarashada oo ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadkii laga qaaday in ka badan 18 kun oo arday | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Wasaaradda Waxbarashada oo ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadkii laga qaaday in ka badan...
Wasaaradda Waxbarashada oo ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadkii laga qaaday in ka badan 18 kun oo arday
Arday tiradoodu gaareyso 2883 arday ayaa ku dhacday halka ay ku baaseen ama ku gudbeen arday gaareysa 15, 356 imtixaanka shahaadiga ee Wasaaradda Waxbarashada ay ka qaaday ardayda dugsiyada sare ee dalka sanad dugsiyeedka 2016/2017.
Wasiiru dowlaha Wasaaradda Waxbarashada ee Xukuumada Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle ayaa sheegay in sanadkan ay imtixaanka ku baaseen 15, 356oo arday,
Tirada imitixaanka ku baastay sanadkan waa 15,356 arday, 5,094 ay gabdho yihiin halka 10,262 ay wiilal yihiin, sida uu sheegay Wasiiru dowlaha Wasaaradda Waxbarashada.
Hoos ka akhriso magacyada 10 ka arday oo kaalimaha ugu horeeya galay
Wasaarada Waxbarashada ayaa sheegtay in qorshuhu ahaa in ay imtixaanka u fariistaan 23,000 oo arday balse imtixaanka aysan ka qeybgalin tiro gaareysa 4761 arday iyadoo aaysan sheegin sababta ay uga baaqsadeen ardaydaas inay u fariistaan imtixaanka.
“23,000 waxa ay ahayd intii is diiwaangelisay, balse waxaa sanadkan imtixaanka u fadhiistay 18,239 arday, inta kale waa ay u suurta geli weysay inay imtixaanka galaan” ayuu yiri Feysal Cumar Guuleed Wasiir ku-xigeenka Waxbarashada Soomaaliya.
Haddii la isku daro tirada imtixaanka ku dhacday iyo kuwa aan fariisan ayaa guud ahaan waxa ay gaarayaan 7644 arday taasoo ah tiro aad u badan.
Previous articleMaxaa ka soo baxay shir Golaha wasiirada ay Muqdisho ku yeesheen
Next articleKhilaafka u dhaxeeya Jarmalka iyo Turkiga oo sii xoogaystay